Magaalada Baardheere oo Isgaarsiinta hawada laga saaray – STAR FM SOMALIA
Magaalada Baardheere oo Isgaarsiinta hawada laga saaray
Sida ay sheegayaan wararka inaga soo gaaraya Magaalada Baardheere ee Gobolka Gedo, waxaa saaka guud ahaan hawada laga saaray Isgaarsiinta Magaalada Baardheere.
Saraakiil Itoobiyaan ah iyo kuwa Somali ah ayaa la sheegay inay tageen xarumaha Isgaarsiinta Magaalada Baardheere, kadibna ay ku amreyn masuuliyiinta Shirkadaha inay hawada ka saaraan Isgaarsiinta.
Inkastoo aanan si rasmi ah loo ogeyn ujeedka ka dambeeya amarka lagu damiyay Isgarsiinta Magaalada Baardheere, ayaa wararka soo baxaya waxa ay sheegayaan sababta loo damiyay Isgaarsiinta inay tahay ciidamada Huwanta oo ku dhaqaaqay deegaano ku yaallo duleedka Degmada Baardheere.
Ciidamada Itoobiya iyo kuwa Somalida ayaa la sheegay inay howlgal u aadeen duleedka Degmada Baardheere, halkaasi oo laga sheegay inay ku sugan yihiin dagaalyahano ka tirsan Ururka Shabaab.
Taleefoonada Magaalada ayaanan shaqeyneyn, waxaana shaqeynaya Internetka kaliya, sida ay soo gudbiyeen Suxufiyiin ku sugan Magaalada Baardheere.
Baardheere oo ah Magaalo Istaraatiiji ah oo Gobolka Gedo ka tirsan, ayaa 8 oo Shabaab ay maamulayeen kadib waxa ay gacanta u gashay ciidamada Dowladda Federalka Somaliya iyo kuwa Amisom oo hada maamulaya Magaaladaasi.
Dawlada kenya oo sheegtay in ay kala shaqeyn doonto UNHCR dib u celinta qaxootiga soomaalida